Amsterdam Waxay Ka Go'an tahay Inay Qorsheyso Inay Dalxiisayaasha Ka Reebaan Dukaammada Qaxwada Ee Magaalada • Daroogada Inc.eu
Amsterdam waxaa ka go’an qorshayaasha looga ilaalinayo dalxiisayaasha maqaayadaha kafeega ee magaalada
Duqa magaalada Femke Halsema ee magaalada Amsterdam ayaa leh aragti cusub oo ku saabsan magaalada iyo maqaayadaha laga qaxweeyo markii dalxiisku mar kale tago.
Halsema, oo lix sano xilka duqa ka bilaabay 2018, waxay soo bandhigtay soo jeedin ka mamnuucaya dalxiisayaasha inay booqdaan meheradaha qaxwada ee magaalada.
Warqad ku taariikheysan 8 Janaayo, Halsema waxay ku sharaxeysaa soo jeedinteeda, oo ay ku jiraan sharciyo adag oo loogu talagalay dukaamada kafeega, sida ka hortagga inay noqdaan silsilado dukaamo badan leh, iyo xaddidaadda marin u helka muwaadiniinta maxalliga ah.
Soo jeedinta ayaa dhalisay dareeno kala duwan, warbixin kala duwan oo warbaahineed. Halsema ayaa qorshahan kala hadli doonta xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada dabayaaqada bishaan.
Halsema ayaa sidaa u sheegtay wargayska The Guardian-ka in dukaamo xashiishad ah oo aad u tiro badani ay koraan oo qaarkoodna ay xidhiidh la leeyihiin dambiyo abaabulan.
"Amsterdam waa magaalo caalami ah waxaanan dooneynaa inaan soo jiidano dalxiisayaasha, laakiin taajirnimadeeda, quruxdeeda darteed iyo hay'adaha dhaqanka awgood," ayay tiri Halsema, iyadoo intaa ku dartay in magaalada ay wali sii ahaan doonto "furfuran, soo dhaweyn iyo dulqaad" dukaamada.
Amsterdam waxay la socotaa dukaamada kafeega sida magaalooyinka kale
Maamulada qaar ka mid ah Nederland waxay horay u soo saareen mamnuucida dalxiiska ee la midka ah, sida magaalooyinka Maastricht iyo Den Bosch, kuwaas oo isku dayay inay si weyn u yareeyaan tirada dalxiisayaasha xashiishka ee ka yimaada Belgium, Jarmalka iyo France.
Amsterdam waxay la socotaa dukaamada kafeega sida magaalooyinka kale (afb)
Amsterdam waxaa ku yaal hadda qaar ka mid ah 166 meheradaha laga qaxweeyo. Daraasad ay sameysay dowlada ayaa lagu ogaaday in magaalada ay yeelaneyso wax kayar 70 hadii dadka martida ah loo diido inay booqdaan dukaamada.
Haddii magaalada ay ku sii socoto qorshaha, Halsema waxay sheegtay in kalaguurka uu qaadan karo bilo.
Sida laga soo xigtay Joachim Helms, oo ah afhayeenka Ururka Tafaariiqleyda Cannabis, oo matalaya milkiilayaasha dukaamada kafeega, isbeddelada la soo jeediyay ayaa dhab ahaantii ku qasbaya dalxiisayaasha inay iibsadaan xashiishkooda qaab kale.
"Cannabis waa badeecad caan ah oo dadka adduunka oo dhami ku raaxaystaan," ayuu yidhi. Dadku waxay rabaan inay cabaan laabatadooda. Haddii taasi ka shaqeyn weyso dukaan kafee ah, waxay ku iibsadaan wadada. “
Xagaagii hore codsi ayaa la abaabulay oo ku baaqaya in dalxiiska la yareeyo ugu badnaan 12 milyan oo habeen ah oo la joogo habeenkii Amsterdam.
Ilo ay ka mid yihiin CNN (EN), DutchNews (EN), DutchReview (EN), TheGrowthOP (EN)
Cannabis hadda waa laba jeer oo xooggan sida kow iyo toban sano ka hor, daraasadda ayaa sidaas tiri
Natiijooyinkaani waxay muujinayaan in xashiishka xashiishadda uu si dhaqso leh uga beddelay Yurub oo dhan, taasoo keentay ...
Alaab bixiyaha cannabis waaweyn
Maaddaama ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu xawliga badan beeraha xashiishadda Yurub, soo saaraha abuurka xashiishadda ee Royal Queen Seeds ...
Netflix waxay cadeyneysaa in marijuanaantu ay tahay mid guud
Qof kasta oo raadinaya caddayn rasmi ah oo ah in xashiishku yahay mid caadi ah ayaa fiirinaya ...